Wareysigii aadka loo sugayay ee Oprah Winfrey oo laga sii daayay warbaahinta Mareykanka iyo Britain.Amiir Harry iyo Meghan. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wareysigii aadka loo sugayay ee Oprah Winfrey oo laga sii daayay warbaahinta...
Wareysigii aadka loo sugayay ee Oprah Winfrey oo laga sii daayay warbaahinta Mareykanka iyo Britain.Amiir Harry iyo Meghan.
‘Wadahadal ku saabsan sida midabka uu ilmuhu noqon karo’
“Waligay ma sheegayo hadalkaas,” ayuu yiri Harry. “Xilligaas wuxuu ahaa mid aan fiicnayn, xoogaa waan naxay.”
Harry wuxuu yiri “waa wax lala yaabo”, isagoo intaa ku daray: “Maxaad kaloo weydiisan kartaa?” – laakiin wuxuu yiri wa ilmihii ugu dambeeyay.
Previous article Sheekh Shariif oo soo saaray bayaan deg-deg ah oo uu kaga hadlayo abaaraha adag ee ka jira Gedo iyo sidoo kale tan ka dhalatay cudurka safmarka ah Covid-19
Next articleGuddiga loo xil saaray aaska Cali Mahdi oo sheegay in maalinta beri ah la keeno doono Maydka Muqdisho.
Waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in guddiga doorashooyinka Uganda ay shaaciyaan cidda ku guuleysta doorashada khamiistii ka dhacday dalkaas. Ku dhawaad saddex meelood labo...